Iinkonzo zokuTywina iChina mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
I-DHUA ibonelela ngeenkonzo zokwaleka kwamashiti e-thermoplastic. Senza i-premium ye-abrasion enganyangekiyo, inxamnye nenkungu kunye nokugubungela isipili kwi-acrylic okanye amanye amaphepha eplastiki kunye nezixhobo zethu zokuqhubela phambili kunye nezixhobo zokulungisa. Yinjongo yethu ukunceda ukufumana ukhuseleko ngakumbi, ukwenza ngokwezifiso ngakumbi kunye nokusebenza ngakumbi kumaphepha akho eplastiki.
Iinkonzo zokwaleka zibandakanya oku kulandelayo:
• I-AR-Ukukrwela ukumelana nokukhusela
• Ukwaleka inkungu
• Ukwaleka kwesipili umphezulu
I-DHUA ibonelela ngeenkonzo zokwaleka kwamashiti e-thermoplastic kunye neenkonzo zokwaleka ezibonakalayo kwifowuni ephathekayo. Apha sichaza ikakhulu iinkonzo zethu zokwaleka iishiti ze-thermoplastic.
Senza i-premium ye-abrasion enganyangekiyo, inxamnye nenkungu kunye nokugubungela isipili kwi-acrylic okanye amanye amaphepha eplastiki kunye nezixhobo zethu zokuqhubela phambili kunye nezixhobo zokulungisa.
Yinjongo yethu ukunceda ukufumana ukhuseleko ngakumbi, ukwenza ngokwezifiso ngakumbi kunye nokusebenza ngakumbi kumaphepha akho eplastiki. Ukwenza oko, sisebenza kunye nawe ukukhetha ukutyabeka ngokusekwe kwimeko yokusebenza kunye neemfuno zemveliso. Emva koko sidibanisa iinkonzo zokulungiselela eziphambili, itekhnoloji yesicelo esifanelekileyo kunye nemisebenzi yasemva kokutyabeka ukwenza ukusebenza ngokugqibeleleyo kokugquma kwamashiti eplastiki.
I-AR-Scratch Ukwaleka okunganyangekiyo
Ukubhabha okunzima okanye ukutyabeka okungachaphazeliyo zibizwa ngokufanelekileyo ngerabrikhi enganyangekiyo. Ukwaleka kwethu kwe-AR Scratch Resistant kukonyusa ukunganyangeki kwe-abrasion kunye nokuchasana nemichiza kwiphepha ngelixa kugcinwa iipropathi ezibalaseleyo ezinxulunyaniswa ne-DHUA acrylic okanye elinye iphepha leplastiki, kwaye yandisa ubomi benkonzo yemveliso.
Ukuxhathisa kwe-Abrasion kugalelwe i-acrylic okanye elinye iphepha leplastiki lolona khetho lufanelekileyo xa ukhuseleko ekukrwemeni yeyona nto iphambili. Ifumaneka ngokutyabeka kwelinye okanye omabini amacala, ilungele ngokufanelekileyo izicelo ezifuna umvalo, ibala kunye nokumelana nesinyibilikisi.
I-DHUA ibonelela nge-anti-fog enzima ukutyabeka okucacileyo okubonelela ngombala okuhlala ixesha elide, ukuxhathisa okungaphezulu kokungqubeka kwaye kulungiselelwe isiko lephepha le-polycarbonate, ifilimu ye-polycarbonate, sisambatho esinokuhlanjwa ngamanzi kwaye siyangqinelana nonyango lwesipili. Ukusetyenziswa kwayo kuyindalo kwindawo ye-visor, ezinje ngokhuseleko ukhuseleko, iimaski kunye nekhaka lobuso, usetyenziso lwe-elektroniki njalo njalo.
Ifilimu encinci yealuminium ifakwe kwi-substrate, kwaye ikhuselwe ngengubo ecacileyo yokukhusela. Ifilimu inokuba yeyoku-opaque yokwenza umgangatho ophezulu wokubonakalisa, okanye ukungafihli nto ukubonakala kweendlela ezimbini, okwaziwa njengesipili esinamacala amabini. Ngokwesiqhelo i-substrate egutyungelweyo yi-acrylic, kunye nezinye iziqwengana zeplastiki ezinje ngePETG, iPolycarbonate kunye nephepha lePolystyrene elinokuthi libotshwe ukwenza ezi ziphumo zifanayo.
Iiplastikhi zoMgangatho oPhezulu, Ukunyanzelwa kwesiko. Cela isicatshulwa Namhlanje! Sikulungele ukunceda uyilo kunye nokwenza into oyifunayo kwiProjekthi yakho.
Cacisa ukuGubungela ii-Acrylic